यी महिलाले कपडा लगाउन बिर्सिइन् त ? Kasthamandap Daily
यी महिलाले कपडा लगाउन बिर्सिइन् त ?
एजेन्सी। परिवर्तनको मामिलामा फेसन जगत निकै अगाडि छ। परिवर्तनका मामिलामा फेसनले विचित्रको बाटो समाएको छ। जसका कारण महिला र पुरुष कतिपय अवस्थामा हाँसोको पात्र बन्नु परेको छ। अहिले बजारमा यस्ता कपडा पनि आएका छन् जुन कपडा लगाउनु र नलगाउनुमा कुनै फरक छैन।
आज हामी यस्तो फेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जुन कपडा हुबहु शरीरको रंगको बनाइएको हुन्छ। साथै यो कपडा शरीरमा फिट पनि हुन्छ। जसलाई लगाउँदा पहिलो पटक मानिस अचम्मित हुन्छ। उसलाई उक्त कपडा लगाएको मानिसलाई देख्ने व्यक्तिले कपडा लगाउने ठम्याउन मुश्किल हुन्छ। केही यस्तै कपडा लगाएकी एक महिलाको तस्वीर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ।
जसले आफ्नो शरीरकै जस्तो रंग भएको कपडा लगाएकी छन्। उक्त कपडा लगाएर ती महिला एक बसमा यात्रा गर्छिन्, बसमा चढ्ने वित्तिकै सबैको ध्यान ती महिलाले लगाएको कपडामाथि पर्छ। सुरुमा देख्ने मानिसले महिलाले कम्मर मुनि कपडा लगाउन बर्सिछन् भन्ने ठाने। तर जसै उनीहरुले महिलाले लगाएको कपडाको तलसम्म हेरे अनि थाहा पाए की महिलाले त शरीर ढाक्ने गरी नै कपडा लगाएकी रहिछन्।
एजेन्सी। तपाइँले धेरै सुन्दर महिलाका विषयमा सुन्नु भएको होला। कसैसँग पनि तपाइँले यो प्रश्न ...
४ सय वर्ष पुरानो रूख चोरी
काठमाडौं । चोरले केही पनि बाँकी राख्दो रहनेछ । जापानको राजधानी टोकियो नजिकै साइतामास्थित एक ...
८ प्रतिशत पुरुषले मात्र प्रयोग गर्छन् कण्डम
काठमाडौँ । यौन सम्पर्कका लागि सुरक्षित मानिने कण्डम नेपालमा न्यून प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ...
एजेन्सी । कुवेतमा एउटा जोडी विवाह गरेको तीन मिनेटमै छुट्टिएको छ । यो विवाह कुवेतको इतिहासमा ...
भारतको पूर्वोत्तरमा पर्छ असम राज्य । यो राज्यको गुहाटी शहर नजिकै एउटा मन्दिर छ । यो मन्दिरको ...
समुद्रमा तैरिने सुरुङ बन्दै
काठमाडौं । समुद्रमा तैरिने सुरुङ बनाउने काममा नर्वेले निकै प्रगति गरेको छ । यस परियोजनामा काम ...
बिबाहपछि किन ठूलो हुन्छ महिलाको हिप ?
एजेन्सी। बिबाहपछि यौन सम्पर्क बैधानिक बन्छ । बैबाहिक जोडीमा शारिरीक सम्पर्क हुनु प्रकृतीको ...
श्रीमान्ले घर निकाला गरेपछि पुगिन् प्रेमीकोमा, तर ...
कतिपय अवस्थामा महिला पुरुष दुबै बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएका भए पनि उनिहरु अन्य पुरुष तथा ...
यी कामुक महिला, जसले ८० जना पुरुषसँग राखिन् शारीरिक सम्बन्ध
मानिसहरु चर्चामा आउनको लागि के सम्म गर्देन् । यस्तैमा हामी तपाईहरु लाई केहि महिना अगाडि ...